Ny patanty Apple dia mampiseho iPhone misy ny endrik'ilay Mac Pro | Vaovao IPhone
Tokony holazaina fa ny famolavolana ny maodely Mac Pro farany, maodely kokoa noho ilay teo aloha, dia notsikeraina tamin'ny famoahana azy ho toy ny "grater fromazy" ary taty aoriana rehefa manana azy eo alohanao ianao dia te hanana an'io iMac eo amin'ny latabatra fisakafoanao io mba hankafizanao fotsiny ny endriny ivelany mahavariana.
Ny tena marina dia mety tsy tian'ny olona rehetra ity famolavolana ity fa tena tsy misy ifandraisany amin'ny grater fromazy rehefa eo imasonao io. Andro vitsivitsy lasa izay patanty vaovao nosoratan'ny orinasa Cupertino dia nampiseho iPhone misy ny endrik'ity iPhone ity Azonao an-tsaina ve?
Tsara amin'ny zavatra ratsy amin'ny hafa
Tsy lazaina intsony ny fampidirana ity famolavolana Apple Mac Pro patanty ity amin'ny iPhone afaka manana ny zavatra tsara ary miharihary zavatra ratsy hafa. Mba hilazana ny lafy tsara, dia ny fiparitahan'ny maripana tena tsara na koa ny fihazonana mahatalanjona. Raha ratsy dia tsy misy fanoherana ny rano na olana amin'ny loto ao anaty fitaovana aza ...
Ilay patanty hita amin'ny tranonkala Ara-dalàna i Apple Afaka miditra amintsika bebe kokoa na latsaky ny fahitana izy fa ny mazava dia toa sarotra ho an'i Apple ny manampy an'io famolavolana ny Mac Pro io amin'ny iPhone ao anatin'ny fotoana fohy na maharitra. Ireo fitaovana ampiasaina hanamboarana ny Mac Pro dia mety ho ny iPhone ihany na mety hanana zavatra mitovy amin'ny famolavolana isika indray andro any, saingy ny fandikana io endrika io dia toa hitantsika fa mety hitondra fatiantoka bebe kokoa noho ny tombony amin'ny iPhone. Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Ny patanty Apple dia mampiseho iPhone amin'ny endrika Mac Pro
Ny tetika tsara indrindra ho an'ny HomePod sy HomePod mini anao